ओली–नेपाल, कसले फुटाउन खोज्दै छ एमाले ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७८, शुक्रबार १० : ०७
काठमाडौं । बुधबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएपछि धेरैले डिलमा पुगेको पार्टी विभाजन टर्न लागेको संकेतका रुपमा लिएका थिए ।
त्यसमा पनि भोलिपल्टै पुनः दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता जारी रहँदा मेरियट होटलको झ्यालबाट धरहरा हेरेको तस्वीर देखेपछि धेरैले एमालेमा लागेको पार्टी विभाजनको तुवालो काठमाडौं मौसम खुलेको जस्तै खल्न लागेको आकलन गरेका थिए ।
बैठक सकिएर ओली निस्किएपनि नेपाल धेरैबेर होटमै बसे र ओलीका दूतसँग छलफल गरे । बाहिरिएपछि उनले वार्तामा कुनै प्रगति नभएको बताएपछि एमालेजन निराश बन्न पुगे ।
सोही रात नेता वामदेव गौतमसँग ओलीले डिनर लिए । उक्त तस्वीर बाहिरिएपछि एकतावद्ध एमालेका लागि ओलीले प्रयास जारी राखेको लख काटिएको थियो ।
विहीबार(हिजै) यसअघि ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोधेको कारवाही किन नगर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ नेपाल पक्षका २७ जनाले पार्टीमा बुझाएका थिए ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात आज भने नेकपा लगभग फुटको अवस्थामा पुगेको परिदृश्य देखिएको छ ।
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राख्दै ओलीले झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिएनन् भने १२ वर्ष भन्दा लामो समय पार्टी महासचिव चलाएका माधव कुमार नेपाल, पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेतलाई स्थायी कमिटी बाहिर राखे ।
माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहितका नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवादी दिएका छन् । बादललाई चौथो बरियतामा राख्दा लामोसमय एकै पार्टीमा रहेका नेताहरुलाई भने ओलीले बाहिरै राखेका छन् ।
‘माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेतालाई बाहिरै राखेर ओलीले पार्टी छोड भन्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजे’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने ।
हुन त ओलीले गरेको निर्णयले केही अर्थ नराख्ने नेता झलनाथ खनालले बताएका छन् ।
नेता खनालले केपी शर्मा ओलीको गुटले पार्टीका नेताहरूलाई भूमिकाविहीन बनाउने र स्थायी कमिटीबाट हटाउने अधिकार नराख्ने जिकिर गरेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओलीले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बसेर कार्यविभाजनपछि बाह्रखरीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले आजको निर्णयको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
“आज बसेको भने ओलीको गुटको बैठक हो । गुट आफैँमा अवैधानिक कुरा हो । अदालतको आदेशअनुरूप नचल्ने कुनै पार्टी हुँदैन,” खनालले भने, “गुटको बैठक राखेर नेताहरूलाई हटायौँ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।” ओलीको कार्यशैलीले एमाले पुनःगठनको सान्दर्भिकता झन् उचाइमा पुगेको उनले बताए ।
उता एमालेका नेता भीम रावलले अध्यक्ष ओली पार्टी फुटाएर अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाउँछन् । उनले पार्टी फुटाउनका लागि ओलीले निर्णयक कदम चाल्ने दावी पनि गरे ।
विधि र विधान विपरित कसैले पदबाट हटाउँदैमा नहट्ने तर्क गर्दै ओलीको गतिविधि नेकपा एमाले विभाजनको दिशातर्फ बढिरहेको उनले आरोप लगाए । रावलले सहमतिका लागि २ जेठ २०७५ को अवस्थामा नेकपा एमालेको संरचनालाई सक्रिय बनाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
ओलीले आफू पक्षधरहरुको बैठक राखेर नेपाल खनाल पक्षका लागि जिम्मेवारी नदिने र स्थायी कमिटी मै नराख्ने निर्णय गरेपनि नेता गौतमलाई भने स्थायी कमिटीमा राखेका छन् । तर गौतले आफूलाई उक्त बैठको निर्णय मान्य नभएको बताएका छन् । केपी ओलीको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति आफ्नो असहमति रहेको उनको भनाइ छ ।
कसले फुटाउन खोज्दै छ एमाले ?
एमालेको विभाजन निश्चित प्राय रहेको राजनीतिक विश्लेषण जारी रहँदा त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न एमाले कार्यकर्तामा देखिएको छ ।
लामो समयदेखि गुटगत अभ्यास गर्दै आएको एमाले फुटको नजिक पुग्दा एक पक्षले अर्को पक्षमाथि पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाइरहेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेका कारण दुई कदम पछि हटेर एक कदम अघि बढेपनि सहमति गराउन नसकिएको बताउँदै गर्दै नेता नेपालले भने ओलीको दम्भ धरहरा भन्दा पनि अग्लो भएको बताएका छन् ।
आफूहरुलाई बाइपास गरेर ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप नेता रावलको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली भएका कारण पार्टी फुटबाट जोगाउन उनको कदम महत्वपूर्ण हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । ओलीले आफूले एकताको पहल गरिरहेको छु भन्ने पनि देखाउने र सहमतिका कुनै प्रतावहरु लिएर छलफल गर्ने गरेका छैनन् ।
नेता नेपालले मेरियट भेटवार्ताका क्रममा सर्वोच्चले पार्टी व्यूताएपछिको अवस्थामा फर्किंदै त्यसपछिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै आएको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरुको व्यवस्थापन पनि आपसी सहमति र छलफलमा गर्न सकिने प्रस्ताव नेपाल पक्षले राखेको छ तर ओलीले त्यसलाई ठाडै अस्वीर गर्दै आएका छन् ।
‘पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष हुन्छ, यो पार्टीलाई गतिशिल बनाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सत्ता र शक्तिमा रहेको आधारमा अर्को पक्षलाई बाइपास गरेर ओलीले पार्टी फुटाउन खोजिरहेका छन्’ नेपाल पक्षका नेताले भने ।
ओली पक्षले नेता नेपाल पक्षलाई ‘गए जा !’ भनेको जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका पछिल्लो घटनाक्रमले देखाएको छ ।
विभाजनको अवस्थामा एमाले, नयाँ पार्टी बनाउँदै माधव नेपाल